Bouddha be, Phuket ~ Journey-Assist - mahaliana
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Phuket » Big Buddha
Ny fijerena ny Big Buddha ao Phuket. Vidin-javatra.
Big Buddha ao Phuket amin'ny sarintany. Ahoana no hahatongavana any.
Saripika sy horonan-tsary avy amin'i Big Buddha ao Phuket
Hevitra ho an'ny Big Buddha ao Phuket (valin'ny Google)
Hevitra momba an'i Big Buddha ao Phuket (Tripadvisor.ru)
Ary ny Bouddha mihitsy dia mijery hafaliana tokoa, izay manampy trotraka ihany koa ny fihetseham-po! 🙂
Tranonkala ofisialy http://www.mingmongkolphuket.com/
Phuket Big Buddha ao amin'ny sarintany
Big Buddha any Phuket. Sary sy horonan-tsary
Hevitra ho an'ny Big Buddha ao Phuket (famerenana Google)
Toerana tsara. Ary ny Bouddha dia tsara sy mahavariana, Ary mahaliana ilay tempoly eo ambanin'izany. Ary eo aoriany eo ankavian-dàlana eo amin'ny ilany havia dia misy endrika volamena lehibe iray hafa. Na izany aza, amin'ny alàlan'ny tsanganana, ny hira sasany amin'ireo moanina dia alefa, mamorona rivo-piainana hafahafa.
Ny tady eny, afatotra izay rehetra maniry izany. Raha tsorina dia tsara ny mandao vola mankasitraka an'io.
Tsara ny toerana misy azy. Mahafaly ny fijerin'ny Phuket. Toerana maro hahazoana sary tsara.
Mbola misy saka be dia be mandeha, ary tsy Siamese (toy ny tokony ho tany Siam teo aloha), fa volotara mahazatra miendrika 🙂.
Amin'ny ankapobeny, ny toerana dia mahaliana, tena manoro hevitra aho hitsidika.